बुद्धका जीवनी तथा उपदेशहरू | BodhiTv
हाम्रो देश नेपालको सिद्धार्थनगर कपिलवस्तुका शाक्यवंशका राजा शुद्धोदन र मायादेवीको छोरा सिद्धार्थको जन्म ई.पू ५६३ बैशाख पूर्णिमाको दिन लुम्बिनीमा भएको थियो । छोरा जन्मनुभन्दा अगाडि उहाँको आमाले विचित्रको सपना देख्नुभएको थियो । पिता शुद्धोदनले आठजना उत्कृष्ट भविष्यवक्ताहरूसँग यसको अर्थ सोध्दा सबैले मायादेवीबाट एक अद्भूत पुत्ररत्न प्राप्त हुनेछ भनेर भनेका थिए । यदि घरमा बस्यो भने चक्रवर्ती सम्राट बत्रेछ र यदि गृहत्याग गरेमा संन्यासी बत्रेछ र आफ्नो ज्ञानको प्रकाशले समस्त विश्वलाई आलोकित गर्नेछ भनेका थिए ।
बुद्धको वास्तबिक नाम सिद्धार्थ गौतम हो । उहाँको माता मायादेवीको उहाँ जन्मेको ७ दिनपछि निधन भएको थियो । उहाँको पालनपोषण शुद्धोदनको दोस्रो रानी महाप्रजावतीले गर्नुभएको थियो । शिशुको नाम सिद्धार्थ राखियो यसको अर्थ हो “यो जुन सिद्ध प्राप्तिका लागि जन्मेको हो ।” । जन्मोत्सव समारोहमा साधु , द्रष्टा आसितले आफु बसेको पहाडको निवासबाट यो बच्चा या त एउटा महान् राजा या त पवित्र व्यक्ति बत्रेछ भनेर घोषणा गरेका थिए । शुद्धोदनले पाँचौ दिनमा एउटा नामाकरण समारोह गर्नुभएको थियो र आठजना उत्कृष्ट विद्वान व्राम्हणहरूलाई बालकको भविष्य हेरेर बताउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सबैले एउटै भविष्यवाणी गरेर यो बच्चा या त एउटा महान् राजा बत्रेछ या त पवित्र व्यक्ति बत्रेछ भनेका थिए ।
शुद्धोदनले सिद्धार्थलाई चक्रवर्ती सम्राट बनाउन चाहन्थे , उहाँमा क्षेत्रियोचित गुण उत्पत्र गराउनका लागि समुचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुभयो तर सिद्धार्थ भने कुनै न कुनै चिन्तामा डुबेको देखिनुहुन्थ्यो । अन्तमा पिताले उहाँलाई विवाह बन्धनमा बाँधिदिनुभयो ।
सिद्धार्थका पिता शाक्यवंशका राजा थिए । सिद्धार्थका माता मायादेवी कोलिबंशका थिए । ऋषिहरूले पनि सिद्धार्थ या त महान् राजा या त महान् साधु बत्रेछ भनेका थिए । यो भविष्यवाणीलाई सुनेर राजा शुद्धोदनले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म सिद्धार्थको दुःख हटाउने कोशिश गर्नुभएको थियो । एकदिन रथमा जब सिद्धार्थ शहर भ्रमणका लागि निस्किरहनु भएको थियो त उहाँले मार्गमा जे पनि देख्नुभयो त्यसले उहाँको जीवनको दिशा नै बदलिदियो ।फेरि उक्त २९ वर्षको उमेरमा सिद्धार्थको दृष्टि चार दृष्यहरूमा पर्यो । एक बृद्ध विकलाङ्ग व्यक्ति , एक रोगी , एउटा मुर्झिएको पार्थिव शरीर । यी तीन दृष्यहरू देखेर सिद्धार्थले यो जाने कि सबैको जन्म हुन्छ , सबै बृद्ध हुन्छन् , सबैलाई रोग हुन्छ र एकदिन सबैको मृत्यु हुन्छ । उहाँले आफ्नो धनवान जीवन , आफ्नो पत्नी , आफ्नो पुत्र एवम् राजपाट सबै छोडेर एउटा साधुको जीवन अपनाउनुभयो ता कि उहाँले जन्म , बुढ्यौली , दुःख , रोग र मृत्युका बारेमा कुनै उत्तर खोज्न सकोस् ।
विंविसार , उद्रक , आलार , कालाम नामका स्थानहरूमा साङ्ख्योपदेशमा रहेर साधना गर्दा–गर्दै सिद्धार्थ उरुवेलाको रमणीय वनस्थलीमा पुग्नुभयो । त्यहाँ सिद्धार्थले कौडिल्य आदि पाँच साधकहरू भेट्नुभयोे । त्यहाँ सिद्धार्थले ज्ञान प्राप्तिका लागि फेरि घोर साधना प्रारम्भ गर्नुभयो । यस्तो गर्दै–गर्दै ६ वर्षपछि भोकका कारण करिव–करिव मर्ने अवस्थामा पुगेपछि उत्तर प्राप्त नगरी अरु केही गर्ने बारे सोच्न थाल्नुभयो । त्यो समय सिद्धार्थलाई आपूmलाई पहिले घटेको एउटा घटना सम्झनुभयो कि जब सिद्धार्थका पिताले खेत मिलाइरहनुभएको थियो त्यो समय उहाँ एक किसिमको आनन्दित किसिमले ध्यानमा बस्नुभएको थियो र उहाँलाई यस्तो महसूस भएको थियो कि समयस्थित भइसकेको छ ।
धेरै पटक असफल भइसकेपछि गयाको नजिक एक वटवृक्षको मुनि आसन लगाएर बस्नुभयो र निश्चय गर्नुभयो कि प्राणै निक्लेर गएपनि म तबसम्म समाधिमै बस्छु , जबसम्म ज्ञान प्राप्त नगरुँ । सात दिन र सात रात वितेपछि कठोर तपस्या छोडेर उहाँले आर्य अष्टाङ्गमार्ग खोजेर पत्ता लगाउनुभयो । जसलाई मध्यममार्ग सम्यकमार्गका रूपमा पनि लिइन्छ । किनकी यो मार्ग तपस्या र असंयम दुइटैको पराकाष्ठाको बीचको मार्ग हो । आफ्नो शरीरमा केही शक्ति प्राप्तिका लागि उहाँले एक व्राम्हणीसँग केही खीर लिनुभएको थियो । सत्यलाई नजानी उठ्नेछैन भनेर उहाँ त्यो पिपलको वृक्ष –( जुन अहिले वोधिवृक्ष भनेर भनिन्छ ) को मुनि बस्नुभयो । उहाँ रातभर त्यही वृक्ष मुनि बसिरहनुभएको थियो र विहान उहाँलाई ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो । उहाँको अविजया नष्ट भइसकेको थियो र उहाँलाई निर्वाण यानेकी बोधि प्राप्त भयो । उक्त समयमा उहाँ ३५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बुद्ध बत्रुभयो । ध्यानावस्थामा बोधि प्राप्त भएपछि काशीको नजिक सारनाथमा आफ्ना पूर्वकालका पाँचजना साथीहरूलाई उपदेश दिनुभएर आफ्नो शिष्य बनाउनुभयो र प्रथम पाँच शिष्यहरू बनाउनु भयो तथा पहिलो प्रवचन दिनुभयो । बौद्ध परम्परामा यो उपदेश “धर्मचक्र प्रवर्तन” नामले प्रख्यात छ । उहाँले पहिलो धर्मोपदेश वाराणसी नजिक सारनाथमा दिनुभएको थियो जुन उहाँले आफ्नो पहिलो मित्रलाई दिनुभएको थियो । उहाँले पनि वोधि प्राप्त गर्यो फेरि गौतमबुद्धले उनलाई पनि प्रचारका लागि पठाउनुभएको थियो । सम्यक मार्ग भएकोले त्यसैले बुद्धका उपदेशहरूमा धेरै वैज्ञानिकता पाइन्छ ।
बौद्धगयापछि उहाँ सारनाथ जानुभयो ।धर्मचक्रको प्रवचनमा महात्मा बुद्धले भनेका छन् दुई अतीबाट बच्नु आवश्यक छ । बुद्ध धेरै समयसम्म काशीमा धर्मप्रवर्तक हुनुभयो । त्रिपिटक तथा जातकले काशीको तत्कालीन राजनैतिक महत्व पनि सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ । प्राचीन बौद्धग्रन्थमा बुद्धकालमा – ( ई. पू. पाँचौ शताब्दी अगाडि ) काशीको गणना चम्पा , राजगृह , श्रावस्ती , साकेत एवम् कौशाम्बी जस्ता प्रसिद्ध नगरहरूमध्ये एक थियो ।
यी दुई अतीलाई छोडेर मैले मध्यममार्ग सम्यकमार्ग खोजेको छु । यसको सेवन गर्नुपर्दछ ।—( विनय पिटक १,१०) यही “धर्मचक्र प्रवर्तन”को रूपमा पहिलो उपदेश थियो । आफ्ना पाँच अनुयायीहरूका साथ उहाँ वाराणसी पुग्नुभयो । र पूर्णरूपमा “धर्मचक्र प्रवर्तन”का लागि जुट्नुभयो । त्यसबेलासम्म नेपाल लगायत उत्तर भारतभरि उहाँको नाम प्रख्यात भैसकेको थियो र थुप्रै अनुयायीहरू भैसकेका थिए । केही समयपछि राजा शुद्धोदनले बुद्धलाई हेर्नलाई कपिलबस्तु बोलाउन खोज्नुभयो तर जो पनि उहाँलाई बोलाउन आउँथ्यो ऊ स्वयम् बुद्धको उपदेश सुनेर अनुयायी बन्दथ्यो ।
१) बुद्धका अनुसार धम्म यो हो —
— यो मान्नु कि सबै संस्कार अनित्य छन्
२) बुद्धका अनुसार यो अधम्म हो —
— धर्मका पुस्तकहरूलाई गल्तीमा परेको मान्नु
३) बुद्धका अनुसार सद्धम्म यो हो —
— जुन धम्म यो बताओस् कि प्रज्ञा पनि पर्याप्त छैन , यसका लागि शील पनि अनिवार्य छ ।
मृत्युभन्दा अगाडि उहाँले कुशीनगरको परिव्राजक सुभद्रलाई आफ्नो अन्तिम उपदेश दिनुभएको थियो । उहाँको मुखबाट निस्केको अन्तिम शब्द थियो “हे भिक्षुहरू ! यो समय आज तिमीहरूसँग यत्तिनै भन्दछु कि जतिपनि संस्कारहरू छन् सबै नाशवान हुनेछन् , प्रमाद रहित भएर कल्याण गर । ” यो उहाँको अन्तिम वचन हो ।
तत्पश्चात भगवान बुद्ध कुशीनगरमा त्यहाँका मल्लहरूको शालवन उपवनको दुईटा शालवृक्ष्।को बीचमा उत्तरतर्फ सिरान राख्नुभई दाहिनेतिरबाट सिंहश्यय गरी दायाँखुट्टामाथि बायाँखुट्टा राखी स्मृतिसम्प्रजन्य भई लेट्नुभयो । तदन्तर भगवान वुद्ध प्रथमध्यानमा समाधिस्थ भए । त्यसपछि क्रमैसित द्वितीयध्यानमा , तृतीयध्यानमा तथा चतुर्थध्यानमा लीन भए । चतुर्थध्यानपछि क्रमशः आकाशानन्त्यायतन , विज्ञानन्त्यायतन , आकिञ्चनयायतन , नैवसंज्ञानासंज्ञायतन नामक अरूपी ध्यानमा बस्नुभयो । त्यसपछि निरोधसमापत्तिमा बस्नुभयो । ततपश्चात फेरि क्रमैसित प्रथमध्यानमा ओर्लनुभयो । पुनः प्रथमध्यानबाटै क्रमैसित चतुर्थध्यानसम्म पुगी त्यहीँबाट उहाँको महापरिनिर्वाण भयो । त्यतिबेला उहाँ अस्सी वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
सन्दर्भ पुस्तकहरू ः—
१) महान सल्लेख सूत्रोपदेश — अग्गमहापण्डित महोपकारक महास्थविर महाशी सयादा ( नेवारी )
२) Buddhism of Wisdom & Faith— “Tam” Dharma Master of Taiwan Thich-Thien ( अङ्ग्रेजी)
३) आधुनिक विज्ञानको दृष्टिमा बुद्धधर्म — ज्ञानज्योति कंशाकार र लक्ष्मीप्रभा कंशाकार ( नेपाली )
४)उत्तर प्रदेशमे बौद्धधर्मके विकास — दत्त नलिनाक्षी ( हिन्दी )
५) सम्यक संस्कार — भिक्षु सम्यक सम्बोधि प्रौणपुत्र ( नेवारी )
१०) बुद्ध र बुद्धवाद — अग्गमहापण्डित महोपकारक महास्थविर महाशी सयादा ( नेपाली )
साभार लेखककाे ब्लगबाट